Umanyolo we-Organic | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Umanyolo we-Organic
Indlela yokutshala ama-roses entwasahlobo, ehlobo nasekwindla - sibonisa izimfihlo
I-rose ibilokhu ibhekwa njengendlovukazi yezimbali, ngokusobala, ngakho-ke ingenangqondo kakhulu. Imbali idinga ukunakekelwa nokunakekelwa kulo lonke umjikelezo wokuphila. Ikakhulukazi i-rose idinga ukufaka umquba, ngaphandle kokuthi ubuna futhi iphela ukuqhakaza. Amaminerali amaminerali for roses Namuhla, ezitolo zezimbali kukhona ukukhethwa okukhulu kwamaminerali amaminerali ekudleni ama-roses: ekwakheni kwamakhemikhali, ema-granules, ama-powders.
Izici iklabishi Umanyolo ukwedlula ukondla iklabishi ukwakha ikhanda iklabishi
Iklabishi iyisitshalo esivamile, kodwa esidinga kakhulu imifino. Ukuze kuqinisekiswe ukubunjwa okunembile kwamakhanda amakhulu nezinsindo, kubalulekile ukuthatha indlela enomthwalo wokufaka umanyolo nokufaka umanyolo esitshalweni. Imithetho eyisisekelo yokondla iklabishi omhlophe Lesi siko sithanda inhlabathi evulekile neyiphatha kahle.
Kungenzeka yini ukutshala insimu ngendwangu
I-nitrojeni iyisici esibalulekile samakhemikhali sokukhula kwezitshalo. Ngeshwa, ihlale isuka emhlabathini ibe emkhathini, ngakho-ke kubalulekile ukuba abalimi bahlaziye njalo ukulahlekelwa kwe-nitrogen engadini ukuze kube nokuvunwa okuhle. Ama-fertilizer e-organic afana ne-guano, umquba, umquba ungase ube umthombo we-nitrogen, kodwa ukuthenga kwabo kudinga izindleko zempahla.
Ukukhetha umanyolo wokushisa engadini
Ngentwasahlobo, lapho imvelo ivuka, izakhamuzi zasehlobo nazo ziyasebenza kakhulu, ngoba kubo yisikhathi esishisayo. Ukuze uthole isivuno esicebile ekwindla, kufanele ulungiselele inhlabathi yokulala embhedeni kwentwasahlobo, kufaka phakathi ukuqoqa umquba oqondile futhi ubheke izilinganiso ezifanele. Kubalulekile ukucabangela izidingo zezitshalo zensimu ezotshalwa kusayithi.
Ukulungiselela umquba emasakeni
Umquba umquba ophilayo ongatholakala ngokubola izici ezihlukahlukene (izitshalo, ukudla, inhlabathi, amaqabunga, amahlumela, umquba). Umquba ungathengwa ezitolo ezikhethekile, futhi ungakwenza ngokwakho. Ukulungiselela umquba emasakeni esikhwameni kuyindlela eyodwa kuphela.
Indlela yokwenza i-elixir yezitshalo, ukupheka okukhulayo okukhulayo
Muva nje, abalimi abaningi nabalimi bacabanga ngokulima okuphilayo. Kodwa-ke, esimweni samanje semvelo, akukho isitshalo esizokhiqiza isivuno esihle ngaphandle kokuthuthukisa izitshalo nokutshala izitshalo. Kodwa kukhona indlela yokuphuma - lezi izixube zokudla okunomsoco kanye nokukhuthaza ukukhula okungenziwa ngezandla zakho kusuka ezintweni zemvelo eziseduze.
Umanyolo ohlaza ": okuyikusetshenziswa, ukupheka nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Ukukhulisa ingadi noma ingadi yemifino akulula njengoba kungase kubonakale ekuqaleni. Ukuze uthole isivuno esikhulu, kubalulekile ukugcina indlela yokunakekela izitshalo: ukuphuza, ukuchelela, nokudla. Ake sikhulume ngamanyolo, okungukuthi ukuhlanganiswa okuluhlaza okwesibhakabhaka, kulesi sihloko. Iyini umanyolo utshani Umquba womanyolo yiwo wonke amakhambi angatshalwe ukuze asetshenziswe ngamasiko, avunyelwe ukuba akhule, abese ahlanza futhi asetshenziswe ekunakekeleni okuyinkimbinkimbi kwezitshalo zegadi nezitshalo zemifino.